Daalibaanka oo qabsaday hub ay ku jiraan in ka badan 200 oo dayuuradood oo ay ka mid yihiin AC-130 + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Daalibaanka oo qabsaday hub ay ku jiraan in ka badan 200 oo...
Daalibaanka oo qabsaday hub ay ku jiraan in ka badan 200 oo dayuuradood oo ay ka mid yihiin AC-130 + Sawirro
(Kabul) 28 Agoosto 2021 – Dagaalyahannada Daalibaan ee la wareegay dalka Afghanistan ayaa la wareegey hub ciidan oo noocyo badan iskugu jira oo ay xitaa dayuurado casri ihi ka mid yihiin.
Waxaa la arkayey Daalibaan oo laamiga ku wada dayuurad Blackhawk ah oo ay middiiba joogto $6m oo doollar, kuwaasoo 7 ka tirsan bishii hore uun lagu wareejiyey Ciidankii kala cararay.
Waxaa dayuuradaha ku jira 23 xabbo oo ah A-29 Super Tucano, 45 xabbo oo ah UH-60 Black Hawk iyo 50 ah nooca dagaalka ee fudud ee MD530 ee ku jirey dagaalkii Ciidanka Rangers-ka ee Somalia.
La Taliyaha Amaanka Qaranka Maraykanka, Jake Sullivan, ayaa todobaadkii hore qirtay in aanay sawir cad ka haynin sida loo qabsaday hub ku kacaya $83 bilyan oo doollar oo haatan ku jira gacanta Daalibaanka.
Previous articleSomaliland oo go’aan cajiib ah ka qaadatay xaaladda ka taagan Afghanistan
Next articleDal ay sharciyan mamnuuc ka tahay in loo kaadiyo jihada dalka Ruushka!